❤️ Goorma ayay tahay waqtiga ugu fiican ee lagu dhejiyo Instagram ? - Winches Club
Goorma ayay tahay waqtiga ugu fiican ee lagu dhejiyo barta Instagram -ka? ?
Haddii aad isku deyeyso inaad sare u qaaddo heerarka hawlgelintaada oo aad kordhiso saldhigga macmiilkaaga, dhejimahaagu waa inay soo jiitaan dareenka ugu badan mar kasta. Waxaa jira dhowr waxyaalood oo aad samayn karto si aad u kordhiso hawlgelintaada., waxaana si faahfaahsan looga dooday qaybteena blogga:
Beegso iyaga hashtags caan ah
Qor taariikh nololeed Instagram cajiib ah
Abuur a bilicsanaanta si aad u istaagto
Haddii aad waxyaalahan oo dhan samayso oo aad soo saarto nuxur weyn, waxaa jira hal shay oo ugu dambeeya oo aad samayn karto si aad booskaaga ugu guulaysato:
Samee boostada marka qof walba internetka ku jiro.
Tani kaliya uma oggolaan doonto dad badan inay arkaan boostadaada., laakiin sidoo kale si loo kordhiyo kartideeda adeegsiga iyo wadaagga. Waa in aan tixgelineynaa waxyaabaha qaarkood inta lagu jiro hawlgalkaan. Markaa aan ku bilowno helitaanka waqtiga ugu wanaagsan ee lagu daabaco boostadaada Instagram..
Ma jirtaa waqti fiican oo lagu dhejiyo barta Instagram -ka? ?
Marka la soo koobo, waxaa jira maalmo iyo waqtiyo gaar ah oo bulshada Instagram guud ahaan ay ugu firfircoon tahay. Fiiri garaafkan oo muujinaya guud ahaan heerarka kaqeybgalka Instagram ee CST : (CST waxay 5 saacadood ka dambaysaa GMT)
Jadwalkani wuxuu muujinayaa in maalmaha ugu wanaagsan ee lagu dhejin karo barta Instagram ay yihiin:
Oo waxaan arki karnaa in waqtiyada ugu fiican ee lagu dhejiyo Instagram ay yihiin:
Arbacada 11 subaxnimo
Arbacada 1da duhurnimo
Jimcaha 9 subaxnimo
Jimcaha 10ka subaxnimo
Waxaan kaloo arki karnaa in maalmaha ugu xun ee wax la dhajiyo ay yihiin:
Wakhtiyada ugu xunna in la soo diro waa:
Maalin kasta laga bilaabo 10 p.m. ilaa 4 a.m.
Kani kaligiis wuxuu na siinayaa meel aad u wanaagsan oo loogu talagalay boostada waqtiga ku habboon si aan u helno ka -qaybgalka ugu macquulsan..
Ka warran Aagagga Wakhtiga ?
Aagagga waqtiga ayaa ah qodob go'aaminaya doorashada waqtiga ugu wanaagsan ee lagu dhejin karo warbaahinta bulshada. Haddii dhagaystayaashaada badankoodu dibadda joogaan, waa inaad tixgelisaa inaad la qabsato istaraatiijiyadaada dhejinta si aad ula kulanto jadwalka shaqaalaynta dadkan.
Tan waxaa loola jeedaa haddii aad joogto Boqortooyada Midowday oo ay jiraan dad badan oo ku nool Mareykanka iyo Kanada kuwaas oo xiiseynaya waxa ku jira, waa inaad isticmaashaa shaxda kore oo aad ku darsato 5 saacadood wakhtiyada ugu fiican.
Tusaale ahaan, haddii aad joogto Boqortooyada Midowday (UK) oo ay jiraan dad badan oo ku nool Mareykanka iyo Kanada oo danaynaya waxa ku jira, waa inaad isticmaashaa garaafka kore oo aad ku darsato 5 saacadood wakhtiyada ugu fiican :
Haddii aad rabto inaad ku qaadato Arbacada 11ka subaxnimo waqtiga ugu sarreeya Chicago, waa inaad ku dhajisaa halkan UK markay tahay 4 galabnimo.
Haddii aad rabto inaad isku mar taabato labada aag waqti, Tixgeli kala qaybinta faraqa oo aad la kulanto xajmigii ugu dambeeyay ee ka-qaybgalka UK adigoo soo dhejinaya 2pm, si aad weli ugu heshid go'aan wanaagsan gudaha Maraykanka laga bilaabo 9 subaxnimo.
Waxaa jira qalabyo kaa caawiya inaad si isdaba joog ah u samayso waqtiyo gaar ah si joogto ah adiga oo jadwal u samaynaya jadwalka.
Guriga IBF, waxaan ku dhexgalnay madalkeena barnaamij -sameeye aad u wanaagsan kaas oo kuu oggolaanaya inaad dejiso barnaamij idaacadaha adiga oo aan ka walwalin.
Soo ogow marka dhagaystayaashaadu aad ugu firfircoon yihiin adeegsiga fikradaha Instagram
Haddii aad leedahay koonto ganacsi oo Instagram ah, Instagram waxay kuu sahlaysaa inaad ku aragto cabbirrada hawlgelintaada adiga oo leh Insights Instagram. Insights Instagram wuxuu ku siinayaa xog shakhsiyeed koontadaada, way fududahay in la fahmo oo si sahlan ayaa loo heli karaa:
Helitaanka bogga koontadaada adiga oo riixaya astaanta midigta hoose ee sawirka astaantaada
Riix on menu “hamburger” midigta sare
Taabo ikhtiyaarka Insights oo leh shaxda baarka ku xigta
Waxaad ka beddeli kartaa tirakoobka nuxurka una gudubtaa xogta waxqabadka iyo cabbirrada dhagaystayaasha.
Waad ku mahadsan tahay sawiradan, waxaad heli kartaa macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan sida dhagaystayaashaadu uga qaybqaataan, sidoo kale goorta iyo meesha ay joogto.
Taas waxaan u arki karnaa koontadan, Isniintii iyo Arbacadii waxay ahaayeen maalmihii ugu fiicnaa koritaanka astaanta, kaas oo waafaqsan miiska ballan -qaadkeenna guud. Waxaan sidoo kale arki karnaa meelaha ugu fiican, taas oo ah macluumaad aad u fiican in la ogaado marka la tixgelinayo aagagga waqtiga iyo waqtiga daabacaadda.
Xogtaan, waa inaad awood u yeelatid inaad go'aamiso bartaada dhibicda saxda ah ee bandhigga si aad u gaarto heerka ugu sarreeya ee hawlgelinta.
Waxaan sidoo kale arki karnaa waxyaabo ay ka mid yihiin burburka jinsiga, iyo sidoo kale waqtiyada kuwa raacsan koontadan ay ugu firfircoon yihiin.
Bilow Hagaajinta Qoraaladaada Instagram
Haddii aad runtii rabto inaad koraan koontadaada oo aad hesho heerarka ugu wanaagsan ee suurtogalka ah ee hawlgelinta, waa inaad u isticmaashaa nidaamyadan faa'iidadaada. Waxa kale oo jira codsiyo dhinac saddexaad ah oo u oggolaanaya adeegsadayaasha Instagram inay arkaan macluumaad kale oo ku saabsan koontadooda si waxtar u leh koritaanka koontadooda..
Kormeeraha Bulshada wuxuu bixiyaa macluumaad fudud, oo qoto dheer si aad si fiican u fahmi karto dhagaystayaashaada oo aad ula socon karto horumarka koontadaada. Waxay hadda samaynayaan tijaabo lacag la'aan ah, markaa is qor oo hadda bilow. Waxaad ku dari kartaa annaga softiweer otomaatig ah iyo jadwalka daabacaadda waqtiga ugu fiican si aad uga hesho hawlgelinta ugu badan ee suurtogalka ah koontadaada.
Maqaal horeInstagram ii ogolaan mayso inaan galo : Hagaha dayactirka
Maqaalka XigaSida sheeko loogu daro Instagram